Abavelisi beCork |China Cork Suppliers & Factory
Material Synthetic Cork Ubungakanani 23.5 × 44 okanye 24 x 44 okanye ngokwezifiso ngokweemfuno umthengi Uluhlu isikhokho ekrwada , isikhokho sokwenziwa, isikhokho composite Ipesenti yokufuma 4.7-4.9% Rebound Rate 98% Uxinzelelo 170kg/m3 230 kg6/m3 kg Unyanzeliso lwePlug 189-210 N Ukutywinwa kokuSebenza Akukho nakuphi na ukuvuza kangangemizuzu engama-30 okanye njalo ngelixa 0.15 Mpa Uxinzelelo lomoya Ukupakishwa kwekhathoni yephepha Isampulu.
igama I-Cork yeNdalo Isixhobo se-Cork MOQ 10000pcs Ubungakanani Ubungakanani boMbala owenziwe ngokwezifiso Umbala we-Cork Logo Isiko lokuPakisha ngaphandle: ibhokisi yebhokisi Ubungakanani bekhathoni bungenziwa ngokwezifiso Yazisa: Ubume obuthambileyo kunye ne-elastic ye-cork yendalo inokutywina umlomo webhotile kakuhle ngaphandle kokuwuhlukanisa ngokupheleleyo umoya. , nto leyo enceda uphuhliso olucothayo kunye nokuvuthwa kwe wayini ebhotileni, nto leyo eyenza ukuba iwayini ibe nencasa ethambileyo kwaye ingqukuva.
igama I-Nature cork Material Cork MOQ 10000pcs Ubungakanani Ubungakanani obungokwezifiso Umbala owenziwe ngokwezifiso weMatheriya yeCork Logo Isiko lokuPakisha ngaphandle: ibhokisi yebhokisi Ubungakanani bekhathoni bungenziwa ngokwezifiso Yazisa: Izikhonkwane zendalo zenziwe nge-oki kwaye zinendawo ekhululekileyo kunye ne-porous surface. Ngaphezu kweminyaka engama-250, ithathe indawo yelaphu le-oyile, iplagi yeplanga njengesixhobo sokutywina sokugqibela.
Ibhotile yewayini iCork yomthi
NameYazisa: Olu hlobo lweplagi yomthi lusebenzisa umphezulu weplagi yendalo kunye nomphezulu weplastiki, esetyenziswa kwiibhotile zewayini, iibhotile zewayini, kulula ukuyivula, abantu abaninzi baya kukhetha le cork.
Material Natural Cork Ubungakanani 23.5 × 44 okanye 24 x 44 okanye ngokwezifiso ngokwemfuno umthengi Ukuhlelwa isikhokho ekrwada , isikhokho sokwenziwa, ukhokho composite Ipesenti yokufuma 4.7-4.9% Rebound Rate 98% Uxinzelelo 170kg/m3 270 kg/m3 270 kg/m3 Unyanzeliso lwePlug 189-210 N Ukutywinwa kokuSebenza Akukho nakuphi na ukuvuza kangangemizuzu engama-30 okanye njalo ngelixa i-0.15 Mpa Uxinzelelo lomoya Ukupakishwa kwebhokisi yebhokisi yeSample.
Isikhokho esihle kakhulu
igama Superfine Cork Material Cork MOQ 10000pcs Ubungakanani Ubungakanani boMbala owenziwe ngokwezifiso Umbala weCork Logo Isiko lokuPakisha ngaphandle: ibhokisi yebhokisi Ubungakanani bekhathoni bungenziwa ngokwezifiso Yazisa: I-cork inokuchaphazela iwayini, Ngokubanzi yi-cylinder cork eyomeleleyo eyenziwe nge-cork ekhethiweyo, ngokucoca, ukubulala iintsholongwane, kwaye emva koko ujonge ngasemva ingasetyenziswa, yeyona ixhaphakileyo kwaye ithandwayo isikhokho kwimarike ngoku.Ngokuba olu hlobo ...